China High Gloss Aluminom Composite Panel emepụta na ndị na -eweta ya Chenyu
A na -ebipụta ogwe ihe mejupụtara aluminom dị ka ogwe ihe mejupụtara aluminom. Ọ bụ ụdị ihe ọhụrụ a na-ahazi ma jikọta ya na usoro na ihe mejupụtara site na iji ogwe aluminom a na-ahụ anya ma kpuchie dị ka elu, polyethylene na plastik polypropylene dị ka isi mkpuchi.
1. Nchapụta nke panel acp dị elu karịa nke nkịtị acp panel, nke na -ewetara ndị mmadụ mmetụta na -enwu enwu.
2. Agba nke ogwe osisi mejupụtara aluminom dị elu na -achakarị acha ọbara ọbara, odo, ọcha, nwa na agba ndị ọzọ na -enwu enwu.
3. Dị ka nzaghachi nke ahịa ịchọ mma n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ahịa amaarala nke ọma na ihe na -eme ka ọ dị mma.
4. Enwere ike iji ogwe ihe mejupụtara aluminom dị elu na iko agba, ọ dịkwa mma karịa iko a na -ese maka mmetụta ọdịdị, arụmọrụ ụlọ na njem njem dị anya wdg.
1. Ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ oloko, ụzọ ụgbọ oloko, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ebe ntụrụndụ, ebe obibi dị elu, Villas, ụlọ ọrụ, ihe ịchọ mma mgbidi na ihe ịchọ mma n'ime.
2. Nnukwu bọọdụ mkpọsa, windo ngosi, akwụkwọ akụkọ n'akụkụ okporo ụzọ, ebe a na -ere akwụkwọ, ụlọ ntu ekwentị, ndị na -eche okporo ụzọ, ụlọ mmanụ ụgbọala dị n'akụkụ ụzọ.
1) ahịrị nhazi
Ahịrị na-arụ ọrụ dị ka ihicha mmanụ na-ete mmanụ, griiz na-egbochi ọxịdashọn na unyi dị iche iche n'oge usoro ịtụgharị nke akwa ejikọtara n'elu mkpuchi aluminom, wee wepu mmiri ozuzo nke silicon, magnesium, ọla kọpa na adịghị ọcha ndị ọzọ. elu aluminom.
2) nkenke mkpuchi akara
Ihe mkpuchi ahụ na-anabata igwe mkpuchi ihe mkpuchi ala atọ nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-arụ ọrụ nkenke na ọnọdụ emechiri emechi na enweghị ntụ, nke mere na a na-ejikwa oke nke ihe mkpuchi mkpuchi na ịdị mma nke mkpuchi ahụ; a na -ekewa oven n'ime mpaghara anọ iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ.
3) Ahịrị mejupụtara ọkụ na -aga n'ihu
Ịhọrọ akpụkpọ anụ polymer nke mbubata, ịdabere na akụrụngwa dị elu, teknụzụ zuru oke, yana njikwa siri ike, ka ogwe osisi nke aluminom-plastik nwere ogo peeling, nke gafere ihe ngosi nke ụdị ama ama n'ụwa.
(1) N'okpuru ọnọdụ ihu igwe nkịtị, agba dị n'elu agaghị agbapụ, ọnya, mgbawa, ma ọ bụ ntụ.
(2) N'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi nkịtị, enweghị peeling ma ọ bụ afụfụ nke mpempe akwụkwọ ahụ ga -eme.
(3) Mgbe ekpughere efere ahụ maka radieshon ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ nkịtị, ọ nweghị ihe mgbawa chromatic na -adịghị ahụkebe ga -eme.
(4) Nyochaa ụzọ nyocha dị ka ụkpụrụ mba ụwa siri dị, yana ihe ngosi niile na -emezu ihe achọrọ maka ụkpụrụ mba na ụkpụrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe nkwekọrịta chọrọ.
(5) Ogwe mgbidi Fluorocarbon mpụga emepụtara dị ka ọkọlọtọ mba nke aluminom-plastik mejupụtara GB/T17748-1999, mkpuchi ahụ bụ 70% fluorocarbon resin, nke a na-eji n'okpuru ọnọdụ ihu igwe nkịtị, anyị nwere ike nye 10-15 afọ mma mmesi obi ike. Na mgbakwunye na ihe anụ ahụ na arụ ọrụ nke ogwe aluminom-plastik nkịtị, ogwe ọkụ aluminom-plastik na-eguzogide ọkụ nwekwara ezigbo ihe na-egbochi ọkụ, na arụmọrụ ọkụ ha ruru ma ọ bụ karịa ọkwa B1 nke QB8624 kwuru.
Nke gara aga: Onye nrụpụta maka Ogwe Mgbidi plastik Ji achọ mma - Ogwe ihe mejupụtara Aluminom - Chenyu
Osote: Ogwe ihe mejupụtara Aluminium agbajiri agbaji